Rev. Pre Htam – Full Gospel Assembly
Rev. Pre Htam
ဆရာမ ပရီထမ်း သည် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် စိန်လုံ မှ အဖ ဉီးထိန်နန်ဇော်နှင့် အမိဒေါ်လီလီ တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်းမောင်နှမ ဆယ်ယောက်မှနဝမမြောက်သမီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဦးပေါင်ဇဲလ်မန်နှင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး သမီးနှစ်ယောက်နှင့်သားတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။
ဗန်းမော် အထက(၁) ၌ အထက်တန်းထိပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ BA (History)ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်
ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမူရရှိသည်။ ၁၉၉၈-၉၉ ခုနစ်တွင် FGBTC ၌ ဓမ္မပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနစ်တွင် Diploma ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉နစ်မှစ၍ ဘုရား၏ခေါ်သံကြားကာ အမူတော်အတွက် ဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး တောင်ဒဂုံ၌ ဆရာကျော်ကျော် ဦးဆောင်သောဧဝံဂေလိအဖွဲ့နှင့် ဧဝံဂေလိဝေဌခြင်း Home cell ၊ Home church များတွင် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအ ဖြစ် ဆက်ကပ်ပါဝင် ခဲ့သည်။
၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် Full Gospel Assembly အသင်းတော်၏အချိန် ပြည့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ဆက်ကပ်ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ဓမ္မသိက္ခာတော်ရအဖြစ် အပ်နှင်းခြင်းခံရသည်။
ယခုချိန်တွင် တောင်ဒဂုံ ကျီစု နယ်မြေ၏ဧဝံဂေလိတာဝန်ခံအဖြစ်နှင့် အသင်းတော်၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခေါင်းဆောင်၊ အသင်းတော်၏ဧည့်ကြိုခေါင်းဆောင် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။